Akụkọ ihe mere eme na njirimara nke Roman Colosseum | Akụkọ Njem
Akụkọ ihe mere eme na njirimara nke Roman Colosseum
Susana Garcia | | Ebe njegharị, Getaways Europe, General, Italia
E nwere ebe ị ga-ahụ opekata mpe otu oge na ndụ gị, na Rome Coliseum Ọ bụ otu n’ime ha. Ọrụ ụlọ nke guzobere ihe dị ka puku afọ abụọ na ụlọ nke nwere akụkọ ihe mere eme na nke na-atọ ụtọ, nke egosipụtara na ọtụtụ ihe nkiri na akwụkwọ akụkọ, yabụ na ọ gaghị abụ onye ọbịa. Agbanyeghị, n'ezie enwere ọtụtụ ihe ịmaghị banyere ihe ncheta Italiantali a.
Nke a Colosseum, makwaara dị ka Flavian Amphitheater, ewu malitere na 70 AD. C. n'okpuru iwu nke Vespasiano, ebe ọdọ mmiri Nerón dị. Enwere otutu echiche banyere ihe kpatara eji wuo ya, echekwara na ọ nwere ike ịbụ ọrụ mmeri mgbe mmeri Rom gachara, kamakwa na ọ chọrọ ịlaghachi Rome bụ mpaghara nke Nero jiri aka ya kee ya obibi, na Domus Aurea. Chọrọ ịmatakwu gbasara Rome Colosseum?
1 Akụkọ ihe mere eme na ịmata ihe
2 Nhazi nke Colosseum
3 Ihe omuma nke taa
Akụkọ ihe mere eme na ịmata ihe
Dabere na akụkọ ihe mere eme nke Colosseum ga-ewe anyị ọtụtụ awa, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ezie ihe na-atọ ụtọ. Ihe owuwu ya malitere na 70s na 72s d. C. na aha ya ugbu a sitere Colossus nke Nero, ihe akpụrụ akpụ nke dị nso na nke taa adịghị echekwa ya. E wuru ya n'ụzọ dị ukwuu na Domus Aurea, na-ejupụta ájá n'Ọdọ Mmiri Nero. Emechara ya n’okpuru iwu nke Emperor Taịtọs, n’afọ 80 AD Enwere ọtụtụ mmasi banyere Kọlọsium a, yabụ anyị ga-anwa ịchọpụta ụfọdụ n’ime ha.
N'ime Kọlọsi a, enwere ikike nke ndị 12.000 nwere ahịrị 80 nke nkwụnye. Ihe dị mkpa ndị na-ekiri egwu si na ala gbagoo, ya na ndị kacha baa ọgaranya na ndị kachasị ike nke Rome nọ na ala, dị ka Emperor, ndị isi obodo, ndị ọka ikpe ma ọ bụ ndị ụkọchukwu. Na stratum nke elu bụ ndị Rom dara ogbenye, nke ọnọdụ dị ala karịa ndị ọzọ. N'ime ya ka emere ọtụtụ ihe ngosi, nke kacha mara amara gladiator ọgụ. A na-alụ ọgụ megide anụmanụ, mmegbu ọha na eze, imegharị agha, egwuregwu sitere n'akụkọ ifo gboo ma ọ bụ naumaquias, nke bụ ọgụ mmiri. Ekwenyere na na mbido ya juputara na mmiri iji rụọ agha ndị a.
Nke a Colosseum e hiwere ya n’afọ 80 AD. C., na ọ bụ ama egwuregwu kachasị ukwuu, nke nwere mmemme were ụbọchị 100. Egwuregwu ikpeazụ dị na ya ka a ga-eme na narị afọ nke isii, karịrị ụbọchị nke a na-ewere na Alaeze Ukwu Rom kwụsịrị. Ka oge na-aga, ụlọ a nwere ọtụtụ ihe, ebe ọ bụ ebe mgbaba, ụlọ ọrụ na okwute. N’ikpeazụ, e jiri ya dịka ebe nsọ nke ndị Kraịst, ya mere, ọ jisiri ike zọpụta onwe ya ruo taa, ebe ọ bụ na a na-eji ọtụtụ okwute ya arụ ụlọ ndị ọhụrụ n’obodo ahụ. Ka ọ dị ugbu a, eweghachitala ya n'akụkụ ụfọdụ ma chebe osisi nke bụ aja adịghị echekwa, yabụ enwere ike ịhụ akụkụ dị ala, mana ọ bụ otu ọrụ dị ukwuu nke alaeze a funyụrụ anya.
Nhazi nke Colosseum
Ihe owuwu amphitheater a bụ ihe ọhụrụ kpamkpam, ebe ọ bụ na ọ bụ nke kachasị na ya. N'ime ha nọ ájá na hypogeum. Arere bu egwuru egwu, oval nke nwere nyiwe nke ejiri aja aja kpuchie, ebe emere ihe ngosi. Mpaghara nke hypogeum bu ala di ala nke nwere tunnels na ulo mkporo ebe ndi n'agha, ndi a mara ikpe na umu anumanu noro rue mgbe ha putara ebe egwuregwu. Mpaghara a nwere nnukwu usoro ndozi mmiri iji wepu mmiri, echere ya na mgbe ụgbọ mmiri gosiri nke naumaquia. Mpaghara nke Cávea bụ nke oche, ya na ikpo okwu, ebe e debere ihe odide ndị kachasị mma.
Akụkụ ọzọ nke na-eju anya ọbụna taa bụ ihe a na-akpọ vomit, nke bụ ọpụpụ nke e si abanye na paseeji iji pụọ na Colosseum. Ha kwere ka ọtụtụ mmadụ pụọ n’oge dị mkpirikpi, nke mere na ihe dị ka mmadụ iri ise ga-ebupụ n’ime ihe dị ka nkeji ise. Ọtụtụ ámá egwuregwu enweghị ike ijikọta ọrụ ndị a na nnukwu ọrụ ha.
Na mpụga ebe anyị na-ahụ a facade na ala anọ superimposed, na ogidi na arches, na a mechiri emechi elu ebe. Nke a na-enye amphitheater ezigbo ọkụ. Na ọkwa ọ bụla ị nwere ike ịhụ ụdị dị iche, ihe a na-ahụkarị n'ọtụtụ ụlọ nke oge ahụ. Ha na-eji usoro Tuscan, Ionic na nke Kọrint, na n’elu nke ha na-akpọ compound.
Na edemede ọ bụ akụkụ ọzọ a na-echekwabeghịzi, ọ bụkwa na ọ bụ mkpuchi akwa nke agbasapụrụ iji chebe ọha na eze site na anyanwụ. Ejiri osisi na akwa mee mkpara, na mbụ ejiri akwara, wee mechaa jiri akwa linin, nke na-adị mfe karịa. Enwere mkpokọta masts 250 enwere ike iji iche iche iji kpuchie naanị akụkụ ụfọdụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ihe omuma nke taa
Taa, Roman Colosseum bụ otu n'ime nnukwu njem nlegharị anya na obodo Itali. N’afọ 1980 UNESCO kwuputara ya dịka ihe nketa ụwa, na July 2007, e lere ya anya dị ka otu n’ime ya Ihe omuma ohuru ohuru nke uwa nke oge a.
Ugbu a, a na-akwụ ụgwọ mma a, ma nwee ike ịhụ ya, ọ ka mma ịbụ ihe mbụ n'ụtụtụ iji nwee ike ịnweta tiketi ozugbo enwere ike. Ọ na-emepe na 8.30 ụtụtụ kwa ụbọchị na tiketi maka ndị okenye na-efu 12 euro. Zọ ọzọ iji nweta tiketi bụ iji Roma Pass, kaadị iji nweta ego na ebe nkiri dị iche iche na ebe ncheta dị iche iche n'obodo ahụ, na-ezere ịnwe kwụ n'ahịrị.
Inside na Colosseum ị nwere ike na-eduzi njegharị, na na elu ụlọ e ụlọ ngosi ihe mgbe ochie a raara nye chi Greek bụ Eros. Ihe ọzọ gbasara Colosseum bụ ngagharị nke'szọ Pope nke obe na Fraịdee Fraịdee kwa afọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Italia » Akụkọ ihe mere eme na njirimara nke Roman Colosseum
Ihe kacha mma nke ndịda Argentina